Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Olona 4 no matin'ny fianjerana fiaramanidina Connecticut
Airlines • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Olona efatra no tao anaty fiaramanidina, voalaza fa fiaramanidina Cessna Citation, raha ny angom-baovao avy amin'ny Federal Aviation Administration (FAA).
Nianjera tamin'ny tranobe indostrialy tany Connecticut ny fiaramanidina.
Ny olona rehetra tao anaty sambo mpandraharaha Cessna Citation maty voadona.
Ireo mpamono afo any an-toerana dia miatrika ny afo natombok'ilay fianjerana.
Ekipa mpamonjy voina any Farmington, Connecticut dia miady amin'ny afo amina toeram-pitrandrahana indostrialy iray izay nanomboka taorian'ny fianjeran'ny fiaramanidina Cessna Citation iray ny trano ny alakamisy maraina teo, toa novonoina avokoa ny olona efatra.
Ny sampan-draharahan'ny polisy Farmington dia nanamafy fa nisy fiaramanidina nianjera tamin'ny tranobe iray tao amin'ny Hyde Road, ary nilaza tamin'ny bitsika iray fa eo an-toerana ny sampandraharaha mpamonjy voina miasa "hamindra ny faritra akaiky azy".
Olona efatra no tao anaty fiaramanidina, voalaza fa fiaramanidina Cessna Citation, raha ny angom-baovao avy any Fitondrana federaly federaly (FAA). Tsy nisy niangana ireo efatra ireo.
Olona efatra no tao anaty fiaramanidina, voalaza fa fiaramanidina Cessna Citation, raha ny angom-baovao avy amin'ny Federal Aviation Administration (FAA). Tsy nisy niangana ireo efatra ireo.
Raha ny filazan'ny polisy Farmington dia tsy nisy ny naratra navoaka tao amin'ilay trano, izay fananan'ny Trumpf mpanamboatra fitaovana alemana.
Amin'ny sary nozaraina avy tamin'ny sehatra teo amin'ny media sosialy, setroka no hita avy teny amin'ny toerana nitrangan'ny fianjerana, niaraka tamin'ny mpamono afo ny famonoana afo lehibe nipoitra avy amin'ny faritra iray amin'ilay trano.
Farmington dia hita any Connecticut's Hartford County, sahabo ho 10 miles (16km) miala ny renivohi-panjakana.